မတူတဲ့ ရန်ကုန် | MyanmaJokes
Pictures » မတူတဲ့ ရန်ကုန်	Apr16
Posted by admin VN:F [1.9.22_1171]Rating: +87 (from 89 votes)မတူတဲ့ ရန်ကုန်, 8.0 out of 10 based on 1 rating9Comments
Ye Yint | May 31, 2012 at 10:21 am	ကၽြန္ေတာ္တို႕ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ၾကီး ရဲ႕ ညရႈခင္းကေတာ့ ေၿပာၿပလို႔မရေအာင္ကုိ အရမး္လွတယ္ေနာ္.
VA:F [1.9.22_1171]please wait...Rating: 4.0/5 (1 vote cast)VA:F [1.9.22_1171]Rating:0(from0votes) Log in to Reply	Zin Moe | May 31, 2012 at 5:47 pm	ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ညရႈခင္းနဲ႕ ကၽြန္ေတာ္တို႕မႏၲေလးညရႈခင္းက အတူူတူပါဘဲလား။.
VA:F [1.9.22_1171]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VA:F [1.9.22_1171]Rating:0(from0votes) Log in to Reply	Ko Cho | June 1, 2012 at 4:49 am	this is black lightin.
VA:F [1.9.22_1171]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VA:F [1.9.22_1171]Rating:0(from0votes) Log in to Reply	Zaw Win | June 2, 2012 at 10:49 am	There are some candle lights missing in the picture.
VA:F [1.9.22_1171]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VA:F [1.9.22_1171]Rating:0(from0votes) Log in to Reply	Yan Linn | June 2, 2012 at 2:06 pm	ဒါမွဒီု့ရန္ကုန္ကြ
VA:F [1.9.22_1171]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VA:F [1.9.22_1171]Rating:0(from0votes) Log in to Reply	Thet Ko Oo | June 3, 2012 at 5:03 am	good
VA:F [1.9.22_1171]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VA:F [1.9.22_1171]Rating:0(from0votes) Log in to Reply	Sanmyint Oo | June 10, 2012 at 5:14 pm	ကြ်န္ေတာ္တကယ္ကိုၿပံဳးမိပါတယ္။ တိုင္းျပည္မ်ားရဲ႕ၿမိိဳ႕ေတြကိုႏွိဳင္းယွဥ္ျပထားတာ”စာ”န႕ဲေဖၚျပစရာမလိုေအာင္ျပည့္စံုလုိ႕ပါ။
VA:F [1.9.22_1171]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VA:F [1.9.22_1171]Rating:0(from0votes) Log in to Reply	Black Punk | June 24, 2012 at 6:45 am	ေျပာစရာကိုမလုိပါဘူးဗ်ာ..
VA:F [1.9.22_1171]please wait...Rating: 0.0/5 (0 votes cast)VA:F [1.9.22_1171]Rating:0(from0votes) Log in to Reply	Sai Naing Htet Aung | February 17, 2013 at 8:50 am	မီးေလလာရင္ပို လွမွာသိလား
You must be logged in to postacomment.	၁ ပတ်အတွင်း လူကြိုက်အများဆုံး +45: ကျွန်တော်နှင့် မီး (49 votes) +27: ဆရာဝင်များသာ (31 votes) +21: အလုပ်ကောင်း (23 votes) +19: ဘာသိချင်သေးလဲ (21 votes) +19: စစ်ဗိုလ် နဲ့ ဆရာမ (21 votes) +19: ကားမှန်ပေါ်ရေးထားတာလေး ဖတ်ကြည့်ပါ (19 votes) +18: ဂိုတ်ပေး ကြမ်းတာ.. (22 votes) +15: အတူတူပါပဲ (21 votes) +11: ယူထားလိုက်ပါ ဆရာအတွက် (11 votes) +7: စပြုံးပြီ (9 votes) လူကြိုက်အများဆုံး +87: မတူတဲ့ ရန်ကုန် (89 votes) +58: ငါသာ မရှိရင် (70 votes) +52: ပြည်သူ့ဆေးရုံ (52 votes) +45: ကျွန်တော်နှင့် မီး (49 votes) +44: ဒီလို ရုံးတက်ခိုင်းရတာ... (48 votes) +37: ကြိုက်လဲကြိုက် ဇိမ်လဲရှိ (43 votes) +37: မြန်မာ EPC (39 votes) +35: ကိုကင်းကောင် (43 votes) +34: သွားပါပြီ စကတ် (40 votes) +33: ရေထဲသာ နေပါရစေ (35 votes) Recent Posts	အပေါ်ခန်းက Wifi မိနေလို့